शिक्षा पोष्ट दैनिक
दरबार हाइस्कूलमा सिटी लाइब्रेरी
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार हाइस्कूल हाताभित्र सिटी लाइब्रेरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कामपाले नवनिर्मित हाइस्कूलमा पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि महानगरले ले
वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली: न विकल्प न सिकाइ
काठमाडौँ । कोभिड–१९ महामारीपछि सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा ६४. ३ प्रतिशत बालबालिकाको सिकाइ प्रभावहीन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरु घरमै सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भए पनि विद्यालय, शिक्षक तथा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा मंगलवारदेखि सुरु गरेको छ । देशभरका चार हजार एक सय पाँच परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको छ । देशभरका परीक्षा केन्द्र
स्नातक तहको परिक्षा तालिका सार्वजनिक, शैक्षिक सत्र खेर नजाने
काठमाडौँ – कोरोनाका कारण गत वैशाखमा स्थगित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहमा अध्ययनरत एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ । वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक
विद्यालय सञ्चालनका लागि कार्यढाँचा सार्वजनिक
कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम विवादः गणितको मर्म बुझाउँदै गणितज्ञ
काठमाडौँ । कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रममा गणितलाई अनिवार्य विषयमा नराख्दा के फकर पर्छ ? यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गणितज्ञहरु सरकारका नीति निर्माता र सरोकार भएकालाई गणितको मर्म
सरकारले १५ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा संघीयता पढाउने
काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्ष १५ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर स्नातकोत्तरमा संघीयता विषय पढाउने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन स्कुल (कुसोम)बीच हालै यससम्बन्धी
त्रिविको स्थगित परीक्षा तिहारलगत्तै हुने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले तिहार लगत्तै स्थगित परीक्षा धमाधम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत चैत महिनामा स्थगित भएका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा
त्रिविको परीक्षा विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँबाट दिन पाउने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई पायक पर्ने परीक्षाकेन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन)को बेला हुन नसकेका परीक्षा त्रिविले विद्यार्थीलाई आफ्नो पायक पर्ने परीक्षाकेन्द्रबाट दिने व्यवस्था मिलाएको हो
नेसनल मेडिकलको असुलीधन्दा: एक लाख नबुझाए परीक्षामा बस्न नदिने धम्की
वीरगन्ज । नेसनल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातकोत्तर (पिजी) अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा एक लाख रुपैयाँ उठाउन सुरु गरेको छ । स्नातकोत्तर परीक्षाको मौका पारेर कलेजले विद्यार्थीबाट रकम असुली गर्न